မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Ep 1 of Hong Kong trip - Preparation for trip
Posted by mabaydar at 12:39 PM
ဒို့ မရေ About me က ပုံလေးက ငယ်ပုံလာဟင်..ဟိဟိ ဗီဒီယိုလေးကြည့်သွားပါတယ်...
:( ဟုတ်ပါတယ်... လူကလဲ ၀နေတော့ ပြောခံရဘီပေါ့... အဟင့်...
I like how you edited your video✩ hope you hadagreat trip
မိတ်ကပ်လေး ကြိုက်တယ်။ အချိန်ရရင် ဘာပစ္စည်းတွေသုံးပြီး ဘယ်လိုလိမ်းတယ်ဆိုတာလေးလည်း ဗီဒီယိုတင်ပေးပါလား (အားမှပါ)း)
ပျော်စရာကြီး.. မမ Edit လုပ်ထားတာ အရမ်းမိုက်တယ်။ ဘာဆော့ဝဲသုံးထားတာလဲဟင်..
ပြောလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ မမနဲ့ ကန်ဒီနဲ့က ၀ါသနာတော်တော်တူတယ်နော်။ လုပ်ရဲတာချင်းလည်း တူတယ်။ ကင်မရာရှေ့မှာ ပြောပါတယ်။ ကန်ဒီ့ ရုံးပတီသီးဟင်း ဗွီဒီယိုကို ကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းတယောက်က ထိုင်ရီတာတဲ့။ လုပ်ရဲလို့တဲ့ ခုဆို ပြောမဆုံးပေါင်ဖြစ်နေဘီ လူကိုတချိန်လုံးစနေတယ် >.<
ဆော့ဝဲလ်က Window movie maker ပဲ ညီမ... Version6for Vista ဒါပေမဲ့ ၀င်းဒိုး7မှာလဲ အင်စတောလုပ်လို့ရတယ်... တချို့ Effect တွေကတော့ Add on တွေနဲ့ သုံးတာ... ၁၄ ရက်ပဲ Free... ပြီးရင်ဝယ်ရမှာ....
ကန်ဒီ့ရုံးပတေသီး ဗွီဒီယိုမှာ ကြည့်ကောင်းပါတယ်... ဘာမှ မရှက်နဲ့... အားပေးနေတယ်...
1/27/2012 9:17 AM
မဗေဒါလဲ မိတ်ကပ်ကို ဒီတစ်ပုံစံပဲလိမ်းတတ်တာပါ... ထွေထွေထူးထူးတော့ ဟုတ်ပါဘူး.. BB cream လိမ်းတယ်... ပေါင်ဒါအုပ်တယ်.. ပါးနီဆိုးတယ်...
မျက်လုံးကိုတော့ youtube က မိတ်ကပ် Tutorial တွေကြည့်ပြီးလိုက်လုပ်တာ...
1/27/2012 9:19 AM
1/28/2012 7:52 PM
ဒီကင်မရာ အသစ်ဝယ်လိုက်တာ မှားပြီထင်တယ်.... နောက်ဆို အဟောင်းနဲ့ပဲရိုက်မှ...
အမှန်တော့ အစ်မ ၀လာတာထက် ကင်မရာက lens က အနီးရိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့်လို့ထင်တယ်... အရင် ကင်မရာနဲ့ ရိုက်နေတာ မျက်နှာအဲလောက်မပြဲဘူး.. ဒီကင်မရာက အဲလိုဖြစ်တယ်...
၀လာတာကို ၀င်မခံချင်လို့ မဟုတ်ဘူးနော်... ဒါပေမဲ့ ကင်မရာထဲမှာ မြင်ရသလောက် သိသိသာသာ ၀မလာဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ...
1/28/2012 11:08 PM